कृषिमा अनुदान र यान्त्रिकीकरण किन आवश्यक छ ?
नेपालको कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्न कृषि विकास मन्त्रालयले २०६९ सालदेखि कृषि बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । पशुपालनमा आकर्षण र लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि पशुपन्छी बीमाको व्यवस्था गरेको थियो । सरकारी सुझावअनुसार नै कृषि तथा पशु बीमालाई बीमा समितिले अनिवार्य गरेको हो । त्यसैअनुरुप नेपालका बीमा कम्पनीहरुले जिल्ला–जिल्लामा सयौं कृषक तथा फर्महरुलाई कृषि बीमा कार्यक्रममा सरिक गराउँदै आएका छन् । विगतमा कुनै वर्ष त विशेषतः हिमाली जिल्लामा कृषि बीमा शून्य रहेको देखिन्छ । कृषि बाली छोटो अवधिका भएकाले बीमा लागतको आधाारमा नभई उत्पादनका आधारमा बीमा गर्नुपर्ने र हरेक गाउँपालिकास्तरमा बीमा युनिट राख्ने व्यवस्था मिलाएमा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिन्छ । विभिन्न प्राविधिक कारणले बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य बारेमा कृषकलाई जानकारी गराउन सकेको देखिँदैन । बाली बीमामा जिल्ला–जिल्लाका किसानको उत्साह निकै कम रहिआएको छ । कृषकको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले ल्याएको कृषि बीमा कुनै–कुनै जिल्लामा त कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । कृषि बीमातर्फ अभिप्रेरित गर्न सरकारले अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।
वर्ष बित्दै जाँदा जिल्ला–जिल्लामा पशु बीमा गर्ने संख्यामा वृद्धि हुदैँ आएको छ । पुनः स्मरण गराइन्छ कि पशुसेवामार्फत कृषकलाई दिइने अनुदानमा समेत अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था छ । तर भनिन्छ कि जिल्ला–जिल्लामा बीमा व्यवसायीले बाली तथा पशुपन्छी बीमाबारे किसानलार्ई पूर्ण जानकारी गराउन नसक्दा बीमाको प्रभाव कम देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले कृषि बीमाको नीति ल्याएर तिर्नुपर्ने प्रिमियमको ७५ प्रतिशत आफैँले व्यहोरिदिँदा पनि किसानले बीमा गर्न रुचि देखाएका छैनन् । बीमा गरेको बाली क्षति भएमा पाउने रकम दिँदा भोग्नुपर्ने झन्झटले उनीहरु निराश छन् ।
बीमा समितिले किसानहरुलाई सजग बनाउन बेला–बेलामा बाली तथा लघुबीमासम्बन्धी तालिम दिने गरेको देखिन्छ । त्यसै भएर होला पशुधन तथा अन्य कृषि क्षेत्रमा सुरक्षण वस्तु तथा जनावर बीमा दाबी र कम्पनीका भुक्तानी बढ्दै गएको छ ।
अन्य देशमा प्राकृतिक प्रकोपले लगाएको बाली नष्ट भएपछि कृषकले डेढ गुणा बढी क्षतिपूर्ति पाउने देखिएको छ । किसानहरुलाई आफ्नो पेसामा अझै दत्तचित्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरिन्छ । पानी र असिनाका कारण नष्ट भएको बालीको क्षतिपूर्ति दिने गरिन्छ । यस्ता घटनाले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएमा यस्तो क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने गरिन्छ । साथै किसानका हितमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत सहजरुपमा ऋृण पाउने गर्दछन् । साथै नेपालमा पछिल्लो समयमा देशको बालीमा प्राकृतिक प्रकोपको कारण नोक्सानी बढदै गएको देखिन्छ ।
विशेषतः तराईमा हरेक वर्ष आँधीहुरीले फलफूललगायत नगदेबालीमा नष्ट पार्दै आएको छ । वित्तीय ऋणमा व्यावसायिक खेती थालेको किसानहरुको बिचल्ली हुदैँ आएको छ । उनीहरु राहतका लागि जिल्लामा रहेका सेवाकेन्द्र, जिल्ला कृषि कार्यालय हुँदै सिंहदरबारसम्म जाने गरेका छन् तर पालिकास्तरमा नै बीमाको व्यवस्था भएमा यस्तो अवस्था आउँदैन । वर्षेनी बित्दै जाँदा अब किसानहरुले यस्तो आपत्विपद्बाट लगानी जोगाउन बीमाको सहयोग पाइआएका छन् । कृषि उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले सरकारले २०६९ माघदेखि घोषणा गरेको अनि २०७०/७१ देखि सुरु गरेको सहुलियत कर्जा र बीमा योजनामा किसानहरु समेटिने क्रम बढ्दो छ । सुरुको वर्ष ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान रकम घोषणा गरेको सरकारले साना किसानलाई पनि समेट्न यो रकमलाई २०७१/७२ देखि ७५ प्रतिशतसम्म बढाएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा पशु बीमामा किसानको आकर्षण बढी देखिन्छ । बीमांक रकमको सीमा एक करोड पनि हटाइएको छ । भ्याट पनि लााग्दैन । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले कृषि र पशुतर्फ करिब ३० करोड रुपैयाँ प्रिमियम अनुदानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ । आव २०७३/७४ मा पाँच अर्ब ९९ करोडबराबरको बीमांक भएको थियो ।
विभिन्न जिल्लामा विशेषतः ३१ जिल्लामा आठ अर्ब ११ करोड रकमबराबरको बाढीपहिरोका कारण बालीनाली क्षति भएको देखिन्छ । २०७४ साउनको बाढीले देशमा पूरा तराई क्षेत्रमा बाढी गई निकै क्षति हुन गएको छ । यसले गर्दा सन् २०७४/७५ को कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान छ । कृषि बालीहरु डुबानमा परेपछि पुरै नष्ट हुने देखिएकोले कृषि उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको हो । यस्ले गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा कृषकलाई बीमालगायत अरु क्षेत्रमा राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रोत्साहन गर्न यथेष्ट कृषि अनुदान आवश्यक
सरकारले दश वर्षभित्रमा देशलाई धान, चामल, तरकारी र माछा–मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको जिल्ला–जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि कार्यालयमार्फत सो अनुदान रकम किसानलाई वितरण गरिँदै आएको छ । यस्तो अनुदान विशेषतः २०७२/७३ देखि धान बीउ, बाली बीमामा ७५ प्रतिशतसम्मको अनुदान, मौरीपालनमा अनुदान, तरकारी खेती, जैविक मल, जिंक पोषक तत्व आदिमा अनुदान, सिफारिसमा किसान छनौट गरी दिइँदै आएको छ । जिल्लामा भएका किसान समूह यस्तो अनुदान रकम फिर्ता जान नदिन सजग हुँदै पनि आएका छन् ।
दुई वर्षअगाडि सरकारले दूधमा सरकारी अनुदान दिई भारतमा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । त्यसबेला प्रतिलिटर करिब ६ रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको देखिन्छ । भारतका डेरीले नेपाली दूध किन्ने मूल्य र नेपाली बजारमा डीडीसीले किसानलाई दिने मूल्यका बीच हुने अन्तर मूल्यबराबर अनुदानका रुपमा डीडीसीलाई दिइने भएको थियो । नेपालमा दूध उत्पादन बढेर किसानले बजार नपाएपछि नेपालको दुग्ध विकास बोर्डले भारतमा निकासी गराउन पहल गरिएको थियो । त्यो बेला नेपालमा दैनिक २५ देखि ३० हजार लिटर दूध बचत भएको भनिन्थ्यो । भारतीय दूधको आयात कम गर्न दूध आयात भन्सार दर छ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत गरिएको थियो ।
बीमासहित अरु प्रोत्साहनका रुपमा नेपालका केही जिल्लामा गाई–भैंसीलाई समेत एक हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता आव २०७२/७३ मा दिइएको थियो । सुत्केरी पशुको स्याहारमा किसानलाई प्रेरित गर्नका लागि उक्त भत्ताको व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । उक्त रकम सुत्केरी गाई–भैंसीलाई पौष्टिक आहारा खुवाउन प्रयाोग गर्नुपर्ने थियो ।
वार्षिक बजेटले हुलाकी, मध्य पहाडी र अन्य राजमार्गहरुमा साना व्यावसायीहरुलाई अनुदानमार्फत आकर्षित गराउँदै देशका विभिन्न क्षेत्रका जमिनहरुमा पकेट क्षेत्रहरु स्थापना गर्दै आएको छ । प्रत्येक जिल्लामा निश्चित क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन ब्लक बनाई कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिने भनिएको थियो । त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा सुपर जोन स्थापना गरी कृषि यन्त्र उपकरण र औजार सेट खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइने भनिएको थियो । कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिइने भनिएको थियो । त्यस्तै कृषि जोन, पकेट र ब्लकमा बीउ, बेर्ना, बिरुवा, माछाका भूराको स्रोत केन्द्र स्थाापनामा अनुदान दिइने भनिएको थियोे । त्यस्तै उत्पादन प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र शीतभण्डार स्थापना गर्न चाहने व्यवसायीलाई पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो तर यस्ता कार्यक्रम उद्घाटन वर्षमात्र कायम भई अर्को वर्ष त हराउँदै गएका देखिन्छन्  ।
वार्षिक ३० अर्बको हाराहारीमा कृषिजन्य आयातमा खर्च हुदैँ आएको अवस्थामा भनिएको थियो कि रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा पनि कायम गर्दै जाने सरकारको भनाइ थियो । त्यस्तै निरन्तरता नभए पनि कुनै बेला दिएका अनुदान कुनै बन्द त कुनै त निरन्तरता हुदैँ आएका छन् । निरन्तरता हुदैँ आएका अनुदानमा कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम थियो । तर यस्ता कार्यक्रम अभिलेखमा पढिने तर कार्यान्वयनमा कमै आउने गरेका देखिन्छन् । त्यसैगरी कुनै बेला निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेर कुनै वर्ष कृषिमा प्रतिफलमा आधारित अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको थियो तर यस्तै अनगिन्ती कार्यक्रम राम्रा देखिन्छन् तर व्यवहारमा कमै देखिन्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न सरकारले आव २०७२/७३ को बजेट कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा अनुदान र छुटको व्यापक सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण
सरकारले कुनै वर्षको बजेटमार्फत किसानहरुलाई प्रोत्साहन तथा कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउने हेतुले कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ल्याएको देखिन्छ । तर ती त्यस वर्षपछि के भए ? सरकारले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न यस्ता परियोजना विगतमा ल्याएको देखिन्छ । यसै परियोजनामार्फत एक वर्ष अर्थात २०७३/७४ मा गहुँ र तरकारी, दुई वर्षभित्र धान र आलु र तीन वर्षभित्र मकै र माछा, चार वर्षभित्र केरा, मेवा र लिचीलगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य राखिएको थियो । तर यो कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरन्तरता देखिएन । नेपालमा कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कृषि विकास मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय, पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषि अनुसन्धान परिषद् आदि खडा भएका छन् । हरेक वर्षको बजेटमा यी सबै क्षेत्रका लागि ६६.१६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका रकम विनियोजन भएको देखिन्छ । यो रकम वार्षिक बजेटको ७–१० प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा बेलाबेलामा कृषि प्रविधिमा आकर्षण गर्न कृषि एक्स्पो हुने गरेको छ । यस्ता मेलामा आउनेहरुले कृषि प्रविधिबारे चासो देखाउँदै आएका छन् । नेपालमा यस्ता मेलाबाट सिकेर किसानहरुले आफ्ना खेतीमा आधुनिक धान काट्ने मेसिन र रोप्ने, सोलार वाटर पम्प, धान कुट्ने र मकै, गँहु पिँध्ने मिल, गाईको दूध दुहुने मेसिन, रुख काट्ने मेसिनलगायतका उपकरण तथा औजार प्रयोग गरी कृषिमा आधुनिकीकरणतर्फ लाग्दै छन् । किसानहरुलाई प्रविधिमा भरपूर ज्ञान दिएमा कृषि चाँडै आधुनिकीकरण हुन जान्छ ।
नेपालका गाउँ–गाउँका किसानहरुले आधुनिक कृषि प्रविधिको माग सरकारसमक्ष गरिआएका छन् । कृषिमा यान्त्रिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याएका कृषि यान्त्रिकीकरण अनुदानसहितका अरु कार्यक्रममा जिल्ला–जिल्लाका किसानहरुले रुचि देखाइआएका छन् । जिल्ला–जिल्लाका अधिकांश सानामात्र नभई ठूला किसानहरु पनि परम्परागत विधिबाट खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम उनीहरुलाई अत्यन्त लाभदायक भएका बताइन्छ । धेरै किसानहरु यान्त्रिकीकरणमा अनुदान चाहान्छन् । कृषि यान्त्रिकीकरणका लागि किसानलाई ट्र्याक्टरदेखि त्यसमा प्रयोग हुने रोटाभेटरलगायतका स–साना उपकरण खरिदमा पनि ५० प्रतिशतसम्म सरकारको अनुदान प्राप्त भएको देखिन्छ । सरकारले व्यक्तिगत किसान, समूह र सहकारीबाट आएका किसानलाई पनि सरकारी अनुदान दिने नीति रहेको छ ।
नेपालका दुर्गम हिमाली जिल्लाहरुमा कृषि प्रणाली विस्तारै यान्त्रिकीकरण हुने दिशातिर अग्रसर छ । दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरुमा कृषि प्रणाली विस्तारै यान्त्रिकीकरण हुने दिशातिर उन्मुख छ । सम्पूर्ण नेपालका क्षेत्रमा गोरुले जोतेर खेतीपाती गर्ने किसान अब पावर टिलरतिर आकर्षित हुन थालेका छन् । कृषिको यान्त्रिकीकरणसँगै उत्पादकत्व बढ्ने भएपछि सरोकारवाला निकायले किसानलाई यान्त्रिकीकरणतर्फ प्रोत्साहन गरेका छन् । सरकारी तर्फबाट ९० प्रतिशत अनुदानमा यस्ता पावर टिलर किसानले पाएका छन् । हिमाली जिल्लाहरुमा पनि खेतीबारीमा जोत्न उपयोगी हुने मिनी टिलर भित्र्याएर पटकपटक गरी कैयन् किसानहरुले अनुदानमा यस्ता टिलर पाएका छन् । युवा गाउँबाट रोजगारीका लागि विदेशमा गएकाले टिलर बढी प्रभावकारी हुने स्थानीय किसानको भनाइ छ । गाउँका युवा विदेशीने र सहरमुखी हँदै गएकाले कृषि श्रमिक अभाव हुन थालेका बेला हाते ट्र्याक्टरको माग बढ्दै गएको छ । साथै गोरुभन्दा ट्र्याक्टर प्रयोग गर्दा सस्तो पर्न जाने कुरा स्थानीयले बताइआएका छन् ।
केही दशकभित्र जिल्ला–जिल्लालाई कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा दीर्घकालीन कृषि योजना अघि सारिएको छ । यसरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रविधिको प्रयोग गर्नैपर्दछ । अन्यथा सम्भव छैन । जिल्लामा चलाएका कृषि पाठशालाबाट कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण हुने आशा गरिएको छ । साथै विभिन्न देशबाट आएका हरेक वर्ष कृषि शिक्षणले कृषिमा र प्रविधिमा कखरा सिकाउँछ । विशेष गरी प्लाष्टिक घरहरु निर्माण गरी तरकारी खेती गर्ने र थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गर्दै जाने हो भने कृषि उत्पादन बढेर जाने हुन्छ । हाइब्रिडजस्ता अरु प्रविधि प्रयोग गरेर कृषिको उन्नत अवस्था देख्न सक्दछौं । कृषिमा उन्नत प्रविधि अपनाएर कृषि उत्पादन बढाएमा मात्र निकासीमा दह्रो आधार बन्न सक्दछ ।
यसो हेर्दा कृषिजन्य वस्तुका उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन सुस्त देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीको नाम राखिएको यस्तो ठूलो परियोजनाको प्रगति निकै सुस्त देखिएको छ । (लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
स्वस्थानी व्रत र यथार्थ
हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म श्री स्वस्थानी माताको व्रत उपासना गर्ने पौराणिक धारणा...
लगानी प्रवर्द्धनको आवश्यकता र समस्या
नेपालमा बढ्दो पर्यटन र गुणस्तर
पुनर्निर्माण र भूकम्प दिवसको सार्थकता